UTyson ungqimuze umgibeli ebhanoyini | Scrolla Izindaba
UTyson (55), uvele kwividiyo eyabwe yi-TMZ, encike esihlalweni sakhe eshaya ngekhanda lo mgibeli ongaziwa obegibele indiza ye-JetBlue Airways. Le vidiyo iphinde ikhombise igazi ekhanda lalo mlisa ogcine ethole usizo lwezempilo.
Abammele uTyson babize isisulu ngokuthi “umgibeli onolaka oqale ukumhlukumeza futhi wamjikijela ngebhodlela lamanzi ngesikhathi ehlezi esihlalweni sakhe.”
IHhovisi Lommeli Wesifunda sase-San Mateo uthe kuleli sonto icala selisuliwe ngemuva kokuthi isisulu noTyson bacele ukuthi icala lingavulwa.
Abammeli balo mshayisibhakela bancome isinqumo sommeli wesifunda ngemuva kokuphuma kwesinqumo, bebonga “ngokucophelela, ukukhuthala kanye nokusebenza ngobungcweti.”